Ityoophiyaa fi Faransaay saayinsii hawaarratti waliin hojjachuufi – Fana Broadcasting Corporate
Ityoophiyaa fi Faransaay saayinsii hawaarratti waliin hojjachuufi
Finfinnee, Bitooteessa 4, 2011 (FBC)- Inistitiyuutiin Teeknooloojii Saayinsii Ispeesii Ityoophiyaa fi Wiirtuun Qorannoo Biyyooleessaa Faransaay saayinsii hawaa irratti waliin hojjachuuf waliigaltee irra gahaniiru.
Dhaabbileen lamaan waliigaltee waliin hojjachuu isaan dandeessisu guyyaa har’aa walii mallatteessuu Minsteerri Inooveeshinii fi Teeknooloojii Ityoophiyaa beeksiseera.
Waliigaltichaanis ragaa haala qilleensaa saatalaayitii irraa argamu fayyadamuun dhibbaa jijjiirama qilleensaan dhufu bu’uuraan hojiilee to’aachuu dandeessisu waliin hojjachuu kan dandeessisuudha jedhameera.
Dabalataanis waliigaltichi teeknooloojii hawaa fayyadamuun hojii qonnaa, hojii bosonaa, hojiilee iddoo bishaan itti argamu addaan baasuu fi hordofuu dandeessisuu fi gochoota biroo waliin hojjachuu kan dandeessisu ta’uun ibsameera.
Ijaarsa dandeettii humna namaa, hojii saayinsii hawaa tajaajila nageenyaaf fayyadamuu dandeessisu uumuu, dirreewwan waliigaltee irra gahaman akkaataa gara gochaatti itti galamu haalota mijeessuun qaama waliigaltee kanaatis jedhameera.
Waliigalticha kan mallatteessan daayreektara Inistitiyuutii Teeknooloojii Saayinsii Ispeesii Ityoophiyaa Dooktar Salamoon Balaayii fi preezdaantii Wiirtuu Qorannoo Biyyooleessaa Faransaay Dooktar Jeen-yeevs Li Gal ta’uu ragaan ministeerricha irraa arganne ni mul’isa.